Iindaba-Iziphumo zokhathalelo lolusu lweoyile ebalulekileyo kumalungu ahlukeneyo omzimba
Iioyile eziyimfuneko zizityalo zezityalo ezikhutshwe kwiintyatyambo zendalo ezihlambulukileyo, amagqabi, ixolo, iimbewu, amasebe kunye nezinye iindawo, kunye neemolekyuli ezinuka kamnandi zezityalo. Iimpawu zezityalo ezicocekileyo zigcinwa ngaphandle kwento eyenziweyo eyenziweyo. Ineziphumo ezizodwa kulusu, emzimbeni nasemphefumlweni.
Ubunzima beemolekyuli zeoyile eyimfuneko yi-1/3000 yeeseli zezityalo, ezingamawaka ali-1000 mancinci kuneeseli zomntu. Ifunxwa ngokulula sisikhumba. Ifikelela kwi-epidermis kwiminithi e-1, i-dermis kwimizuzu emi-2, kunye nenkqubo yokuhamba kwegazi kwimizuzu eyi-10-15. Ngexesha elifanayo nolusu, inokunyanga ulusu ngaphakathi.
Iioyile eziyimfuneko zisetyenziswa ebusweni ukucoca nokuhombisa ulusu. Khumbula ukungxenga ngeoyile esisiseko ngaphambi kokuyifaka ebusweni. Umlinganiselo wokukhuseleka okhuselekileyo ngamaconsi e-1-5 eoyile efanelekileyo kunye ne-5ml (malunga ne-100 lehla)
Ngokubanzi, iiroses, iintyatyambo ezikrakra zeorenji kunye neelamuni zihlala zisetyenziselwa ukwenza mhlophe ebusweni kunye nokugcinwa. Intlaka yokuqhumisa kunye nerose zihlala zisetyenziselwa ukulwa ukuguga. I-cypress kunye ne-rosemary zihlala zisetyenziselwa ukubamba kunye nokuqina; I-lavender, umthi weti okanye igeranium iyacetyiswa kulusu olunamafutha kunye nengxaki!
2. Umhlathi othambileyo kunye nesiseko solukakayi:
Ukufaka isicelo kwezi ndawo zimbini kunokunceda ukutshintsha kwemood kunye nokulinganisa iimvakalelo. (Inkalakahla ethambileyo ixhomeke ngokungagungqiyo okanye ngokuthe nkqo ngaphezulu kolwimi kwaye yenziwe ngokudityaniswa kwemisipha ye-pharyngeal palatine kunye nezinye izihlunu. Inxalenye yethishu eyahlula umlomo kunye nomqala, ngenxa yoko unomsebenzi woku ukwahlula isixokelelwano sokuphefumla nenkqubo yokwetyisa.Umazantsi omngxunya wekraniyali (Ebizwa ngokuba sisiseko solukakayi, esiyinxalenye ebalulekileyo kwezonyango)
Kucetyiswa ukuba kusetyenziswe intlaka yokuqhumisa, isandalwood, ipatchouli kunye nemore.
3. Intamo, ibunzi kunye neetempile:
Xa kukho ukungavisisani entloko nasentanyeni, ukufaka iioyile ezifanelekileyo kula malungu mathathu kunokunceda ukukhulula!
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe i-lavender, i-mint nentlaka yokuqhumisa!
Ukufaka iioyile ezifanelekileyo kwisifuba kunokukhuthaza ukuhamba kakuhle kweendlela zomoya kunye nokunceda ukugcina impilo, nococeko!
Cebisa iioyile eziyimfuneko ezisetyenziswa rhoqo: i-Eucalyptus kunye ne-rosemary, phefumla kakuhle!
Faka iioyile ezifanelekileyo kwisisu, ngakumbi eyona nto iphambili yokwetyisa, ukunceda ukwetyisa okunempilo kunye nokuthomalalisa ukungonwabi ngamanye amaxesha.
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iioyile ezifanelekileyo zejinja, icoriander, ipennel eswiti kunye nepepile emnyama.
Faka iioyile ezifanelekileyo esibindini ukunceda ukukhupha ityhefu nokucoca kunye nokuxhasa umsebenzi wokucoca nokucoca amalungu omzimba.
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ilamuni, iidiliya, igeranium kunye nomjunipha.
7.Ingalo, imilenze kunye nomqolo:
Ukufaka iioyile ezifanelekileyo ukuze uthambise iingalo, izihlahla, imilenze, umqolo kunye neentende zeenyawo kunokunceda ekunciphiseni ukudinwa kunye neentlungu zezihlunu kunye namalungu, kunye nokukhuthaza ukujikeleza kwegazi.
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ioyile eluhlaza eluhlaza, i-lemongrass kunye ne-cypress.
Ukufaka isicelo phantsi kweenyawo kungakhuthaza ukufunxeka okukhawulezayo kweoyile eyimfuneko, kuba ii-pores ezantsi kweenyawo zilula ukufunxa, okunempilo, okukhuselekileyo kwaye kulula ukufunxa iioyile ezifanelekileyo. Iinyawo ezinqabileyo zihlala zithathwa njengonxibelelwano phakathi kwamalungu ahlukeneyo kunye namalungu emzimbeni. Zininzi iindawo ezibizwa ngokuba ziindawo ezinengqiqo. Rhoqo ukukhuthaza indawo ezinomlinganiso ofanayo nokwenza kumalungu ahambelanayo okanye kumalungu. Akululanga ukukhumbula indawo nganye yokubonisa, faka nje ioyile ebalulekileyo kulo lonke unyawo!
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe imo ezolileyo, intlaka yokuqhumisa, vetiver, ylang ylang